LG L3 E400, sida loo xaliyo dhibaatooyinka meelaha | Androidsis
In xiga casharro wax ku ool ah Waxaan ku barayaa inaad xalliso dhibaatooyinka meelaha bannaan ee lagu soo bandhigay LG L3 modelo E400.
El LG L3 E400 waa a casriga Dhammaad-hooseeya oo aad ka heli karto wax-qabad aad u badan oo ka badan inta ay noogu soo bandhigtay warshadda ama asalka, taasina weli waa terminal aad u wanaagsan in la qaado tallaabooyinka ugu horreeya ee Nidaamka Google ee hawlgalka Telefoonada gacanta, Android, waxaan leenahay dhibaato aad u daran, maaddaama qeybta loo qoondeeyay nidaamka ay aad u yar tahay oo si dirqi ah naloo ogol yahay inaan ku rakibno darsin codsiyo ah oo ku xiran cabirkooda.
Casharradan soo socda waxaan awoodi doonnaa inaan ku rakibno ama ku shubno romaan ku saleysan LG firmware asalka ah, qalabkii ugu dambeeyay ee la sii daayay maanta, Android 2.3.6, laakiin horeyba u xallinta dhibaatooyinka booska iyada oo ay ugu wacan tahay qaab loo yaqaan ' sdmerge.
1 Waa maxay Sdmerge?
2 Shuruudaha la buuxinayo
4 Habka biligleynaya Rom
Waa maxay Sdmerge?
El Joogitaanka Waa qaab adeegsanaya kaarka xusuusta dibedda si loogu kordhiyo 1Gb xijaab loogu talagalay nidaamka of our Android sidaa awgeedna sidan ayaa lagu heli karaa meel lagu awoodi karo in lagu rakibo dhammaan codsiyada aan u aragno inay ku habboon yihiin innaga oo aan ka baqaynin inuu booska ka baxo.
Arrintan Hagaha wax ku oolka ah ama casharro waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku xallino dhibaatooyinka meelaha bannaan ee nidaamka kala-baxa annaga oo biligleynaya Rom oo horay u lahaa qaabka Joogitaanka.
Waxa ugu horreeya ee aan maskaxda ku hayno in casharradan loogu talagalay LG L3 E400 kaliya iyo gaar ahaaneed, oo ay tahay inuu haysto kaarka xusuusta ee MicroUSB, hore ayuu u ahaan jiray xidid iyo isaga Dib u soo kabasho kale ayaa si sax ah loo rakibay, intaa waxaa dheer, waa inaad haysataa batteriga si buuxda u buuxsan iyo Qalabaynta USB ka shaqeysiiyay dejimaha boosteejada
Si loo xaliyo dhibaatooyinka boosaska ka jira LG L3 E400 waxaan toosh u ifin doonnaa ParsLand-gb-e400 rom oo gebi ahaanba ku soo aadaya iyadoo lagu saleynayo cusbooneysiin rasmi ah ee ugu dambeysay LG con Android 2.3.6 in kastoo macquul ahaan la Joogitaanka rakibay.
Rom ParsLand Android 2.3.6 oo leh Sdmerge ayaa lagu daray
Marka feylka la soo dejiyo, ayaan nuqul ka qaadan doonnaa xididka sdcard oo aan dib u bilaabi doonno Habka kabashada in la sii wado habka rakibaadda romka.
Si dib loogu bilaabo Habka kabashada, waxaan damineynaa terminalka oo waxaan mar kale daareynaa adoo riixaya badhanka mugga hoose + badhanka ama badhanka Guriga iyo badhanka awooda isla waqtigaas.
Habka biligleynaya Rom
Nadiifi dib u dejinta warshadda, tani waxay tirtiri doontaa dhammaan xogta iyo codsiyada ka imanaya xarunta.
Waxaan doorannaa zip-ka romanka oo aan xaqiijinaa rakibidiisa
Hadda waa inaan sugnaa dhowr daqiiqo oo dulqaad leh illaa iyo inta terminal-ka dib loo bilaabayo oo aan dib ugu qaabeyno xogtayada iyo codsiyadayada, iyadoo farqiga weyn ee hadda jira waxaan heli doonaa meel nagu filan si loo rakibo dhammaan codsiyada aan rabno.
Macluumaad dheeraad ah - Sida loo xidido loona rakibo soo kabashada LG L3 E-400
Soo dejiso - Rom ParsLand Stock Android 2.3.6 oo ay la socoto Sdmerge
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » LG » Sida loo xaliyo dhibaatooyinka booska LG L3 E400
Haye, ma soo dejisan karo «Rom ParsLand Android 2.3.6 oo ay la socoto Sdmerge ay ku jirto» ii oggolaan maayo inaan soo dejiyo! Maxaa dhici karay?
Haye, waxaan ku sameeyay dhammaan talaabooyinkii u dhigma ee ku saabsan soo kabashada iyo markaan dib u bilaabo taleefanka wali waxaan helayaa qaab isku mid ah markii aan iibsaday. Sidii aan waligey ku rakibin romka. Ma noqon kartaa in CWM la cusbooneysiiyay aan la sameyn karin?
Haddii qof i siin karo talaabooyinka la cusbooneysiiyay waan jeclaan lahaa!
Hawsha oo dhan ayaan qabtaa marka aan dhigo si aan u rakibo waxay ku dhammaanaysaa iyadoo la leeyahay "rakibiddii waa la joojiyay". Waxaan ku arkay meel ay ku qoran tahay in siibku khaldan yahay waana sababta uusan u samayn. Gacan ma i siin kartaa?
Romku dhibaato badan buu i siiyaa, wax badan buu burburaa oo wuxuu lumiyaa teel teel
Ku jawaab lumis
Waxaan isku dayay e400g, waxaan ogaaday in ROM-kan uusan laheyn GPS. Markii aan isku dayo inaan rakibo barnaamijyada, taleefanka gacantu wuxuu dib u bilaabayaa si aan kala sooc lahayn 3 daqiiqo, 5 iwm .. Khariidaduhu aad ayey u culus yihiin ... Kama saari karo codka kamaradda ama ma beddeli karo goobta lagu keydiyo.
Aad baad u mahadsantahay inay aniga ila shaqaysay 10-kii kahoreeyayba !!!!
Waad salaaman tahay, waxaan ku weydiinayaa su'aal, marwalba waxaan heystaa dhibaatada xusuusta oo hooseysa, akhriska internetka waxaan arkay in qayb ka mid ah xusuusta micro sd la sameyn karo, waanan sameeyay laakiin waxaan u maleynayaa inaan khalad sameeyay maxaa yeelay xusuusta marwalba wuxuu leeyahay isla boos ka dibna markii aan ku xirayo pc-ga, ma aqoonsanin micro sd-ka waana qaabeeyay, hada waxaan rabaa inaan rakibo rom (markii ugu horeysay) aniguna waxaan raacayaa dhamaan talaabooyinka, waxaan ku rakibayaa romka on micro sd laakiin goor dambe markaan galayo soo kabashada oo aan raadiyo romka Qaabka zip-ka ah waxba ma aanan arkin, miyaad garanaysaa sababta taasi? Waxay noqon doontaa maxaa yeelay waxaan qalad ka dhigay qaybta micro sd waana taas sababta hada romka oo qaab zip ah ii aqoonsaneyn? Maxaa samayn karaa? Jawaabtaada waan sugayaa, salaan
Brandon gonzalez dijo
Saaxiibkaa oo kale wax waliba sifiican ayey aniga ila shaqeeyaan, dhibaatadu waxay tahay kadib marka aan rakibo romka-ga aan dib u bilaabo marwalba marwalba, ma jirtaa waddo lagu xaliyo tan?
Jawaab Brandon Gonzalez
Aaway xididkii sdcard xusuusta gudaha ama dibedda ????
Xididka sdcard waa xasuusta dibedda
Caadi ahaan asalka sdcard badanaa waa xusuusta gudaha tan tan dibedda, sida caadiga ah, waa "Dibadda SD"
Haye sidee wax yihiin? imisa gigs xasuus ah ayey sd leedahay? maxaa yeelay waxaan rakibey romka cusub iyo waxwalba laakiin wali waxaan heystaa oo kaliya 157 mb oo ah xasuusta nidaamka .. Dabcan .. Waxaan hada isticmaalaa 2 gb Memory sidoo kale waxaan isku dayey 4 kale laakiin wali waxay isiineysaa isla meeshaas xasuusta nidaamka. .. jawaabtaada waan qadarin doonaa .. aad baad u mahadsantahay!
Xiriiriyaha Romu wuu xiran yahay, fadlan ma dib u hawlgelin kartaa?
Waad salaaman tahay, wax walbana waxaan ku rakibey xarafka .. waxa kaliya ayaa ah in markaan sawir la galo kamarada ay ii sheegto meel yar .. sawirada waxaa lagu keydiyay SD-ka banaanka waxay umuuqataa inaysan isku waddo ahayn.
Ciise Antonio Triviño dijo
Waxaan haystaa lg l3 oo keena xusuusta 2gb oo aan u badalo awood balaaran si aan u soo dejisto cusbooneysiinta iyo codsiyada waxaan sameeyaa xidid la moodayo laakiin taleefanku waa isku mid mana aqbalo cusbooneysiinta ama soo dejinta maxaa yeelay wuu ka maqan yahay sida haddii aysan taasi ku filnayn, waxay u socotaa sida qoolleyda, xididdada ka dib codsiyada barnaamijyada 'KINGROOT', 'PURIFY' iyo 'LINK2SD' ayaa muuqda laakiin sida haddii aysan jirin wax kale, sidee baan tan u baabi'in karaa, waan ku faraxsanahay caawimaadda ...
Jawaab Jesús Antonio Triviño